Xog: Maxaa ka soo baxay Kulanka Xildhibaanadda Beesha Daarood ee Arrinta Qalbidhagax,? – Hornafrik Media Network
Xog: Maxaa ka soo baxay Kulanka Xildhibaanadda Beesha Daarood ee Arrinta Qalbidhagax,?
By HornAfrik	 On Sep 8, 2017
Kulan ay Caawa ku yeesheen Hoteelka Naasahablood Xildhibaanadda Beesha Daarood ayeey kaga doodeen Qadiyadda Qalbidhagax iyo sida laga yeelayo.
XIldhibaanadda Absame ayaa Kulankaasi u sheegay Xildhibaanadda Daarood inay isaga baxayaan Daaroodnimadda haddii aan lagu garab istaagin qadiyadda Qalbidhagax, Waxayna u sheegeen inaysan qaadi karin in sidii Xoolo Saylad ku jira loo iibsado.
Xildhibaanad Farxiyo Xasan oo ka mid ahayd Xildhibaanadii Absame ee Madasha ka hadlay ayaa Baroor kala dhex dhacday Beesha Daarood, iyadoona ka sheegtay Madasha inaysan Gabadhoodu guur galin, haddii aan lala ridin Khayre iyo Xukuumadiisa, Waxayna sheegtay inaysan jiri doonin wax Daarood la yiraahdo haddii aan lagu garab istaagin Mooshinka Xil ka qaadista Khayre.
Xildhibaanadda Sade iyo Harti oo qaarkood ay ku xulufo ahaayeen Khayre ayaa Shirkaasi ka ballanqaaday inay garab taagan yihiin Absame, kana xun yihiin Tallaabadii Qalbidhagax lagula wareejiyay Itoobiya, Waxayna u ballanqaadeen Absame inaysan uga harayn Dagaalka ay arrintan kaga dhiidhiyeen.
Kulankan markii uu dhamaaday ayaa Xildhibaanadda Sade waxay la kulmeen Farmaajo waxayna u sheegeen inaan la difaaci karin Xukuumadda Khayre, isla markaana ay Taariikh madoow noqonayso haddii cidlo looga tago Absame oo u soo habar wacday, Waxayna Madaxwaynaha ugu laab qaboojiyeen in Kacdoonkan uusan isaga saamayn doonin oo ay ku eg tahay Xukuumadda uu hogaamiyo Khayre.
Madaxwayne Goboleedyadda Puntland, Jubbaland, iyo Dowlad Deegaanka Soomaali Galbeed, ayaa iyaguna cadaadis ku haya Xildhibaanadda Daarood inay taageeraan Go’aanka Xukuumaddu ay ku dhiibtay Qalbidhagax, taasoo ay Xildhibaanadda ku gacan sayreen.
Kulanka Bari ee Baarlamaanka ayaa la filayaa inay Xildhibaanaddu ku cadeeyaan Mawqifkooda ku aadan Qadiyadda Qalbidhagax. Waxayna isku balansadeen inay ka hor yimaadaan Go’aanka Xukuumadda.
Xog: Xukuumadda Khayre oo bari qorshaynaysa in Fowdo laga dhex abuuro Fadhiga Baarlamaanka, Akhriso Faahfaahin.
Cumar C/rashiid “Dhiibistii C/kariin Qalbi Dhagax khalad weyn ayay aheyd”